5L VAPET400 - 5L တဝက်အော်တိုဘူးလေမှုတ်စက်က တစ်နာရီတွင် ၅ လီတာ ဘူးပေါင်း ၄၀၀ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
မ်ာဒယ်- 5L VAPET400 - 5L
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း- တစ်နာရီလျှင် ဘူးပေါင်း ၄၀၀
အမြိုးအစားခှဲခွားထားသောနရော: လမှေုတျစကျ ,	Bottle (5-liter to 20-liter)
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VAPET400-5L
The cheapest5liter bottle blowing machine with capacity of 400 bottles/h has been supplied to the market by Viet An with the model 5L VAPET400 - 5L. Customers who are wishing to buy semi-automatic and automatic blowing machine, please contact the hotline immediately: 0949.41.41.41 for the best advice!
တစ်နာရီလျှင် ၄၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသော ဈေးချိုသာတဲ့ ၅ လီတာ ဘူးလေမှုတ်စက်ကို Viet An မှ ဈေးကွက်အတွင်းသို့ 5L VAPET400 - 5L မော်ဒယ်ဖြင့် ပေးပို့ပေးနေပါတယ်။ တဝက်အော်တိုနဲ့ အော်တို ဘူးလေမှုတ်စက်များကို ဝယ်ယူချင်သော သူများအတွက် hotline နံပါတ် ၀၉- ၄၉ ၄၁ ၄၁ ၄၁ ကို အခုပဲ ဆက်သွယ်ပီး အကောင်းဆုံး အကြံဥာဏ်ကို ရယူလိုက်ပါ။
Viet An Day article will introduce to you the semi-automatic VAPET400 5L bottle blowing machine, but extremely many advantages and useful for businesses trading in bottles or bottled water. bottle ... supplied by the company.
Viet An ဆောင်းပါးမှ သင့်ကို တဝက်အော်တို 5L VAPET400 - 5L ဘူးလေမှုတ်စက်ကို မိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ကောင်းကျိုးများစွာရှိပြီး ဘူးများ၊ ရေသန့်ဘူးများ စီးပွါးရေး ကုန်သွယ်မှုအတွက် အသုံးဝင်ပါတယ်။
VAPET4005Liter bottle blowing machine with capacity of 400 bottles/h
5L VAPET400 - 5L တစ်နာရီလျှင် ဘူးပေါင်း ၄၀၀ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသော ဘူးလေမှုတ်စက်
A little bit about Viet An, which supplies the best 5L VAPET400 - 5L bottle blower in Vietnam
ဗီယက်နမ်တွင် အကောင်းဆုံး 5L VAPET400 - 5L ဘူးလေမှုတ်စက်ကို ပေးပို့နေသော Viet An အကြောင်း အနည်းငယ်
Viet An General Trading Joint Stock Company, formerly known as Viet An general and commercial limited liability company, was equitized since August 2009. Viet An isacompany, enterprise specializing in manufacturing, importing, exporting, distributing bottle blowing machine, bottle blowing machine, filling machine, ice making machine, water purification line and many other products with brand name VA, USApec. , Vinaro number 1 in Vietnam.
With approximately 20 years of establishment and development. Viet An has received many medals and certificates of merit personally awarded by the State and the Prime Minister. Some Viet An awards have been achieved such as:
Viet An General Trading Limited Company လို့ လူသိများခဲ့ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လမှာ Viet An General Trading Stock Company
လို့ပြောင်းလဲခဲ့ကာ ရေခဲထုတ်စက်များ၊ RO ရေစစ်များ၊ ဘူးလောင်းဖြည့်စက်များ၊ ဘူးမှုတ်စက်များ၊ ရေစစ်လိုင်းများ၊ ဗီယက်နမ်တွင် နံပါတ် ၁ ဖြစ်တဲ့ UA, USApec, Vinaro ကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ်အောက်မှာ ပစ္စည်းများ စသည်တို့ကို ထုတ်လုပ် တင်ပို့ ရောင်းချတဲ့ နေရာမှာ ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ် ၂၀ နီးပါး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကြောင့် Viet An သည် အစိုးရနှင့် ဝန်ကြီးချုပ်မှ ပေးအပ်တဲ့ ဆုတံဆိပ်များ၊ အကျိုးဆောင် လက်မှတ်များ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ Viet An ၏ ဆုတံဆိပ်အချို့ကတော့…
Gold medal for high quality Vietnamese goods in 2009.
Certificate of Viet An brand achieved ISO 9001: 2015 certification.
Semi-automatic5liter bottle blowing machine with capacity of 400 bottles/h
တစ်နာရီလျှင် ဘူးပေါင်း ၄၀၀ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသော တဝက်အော်တို ၅ လီတာ ဘူးလေမှုတ်စက်
The 5L VAPET400 - 5L bottle venting machine isa5 liter bottle blowing machine withacapacity of 400 cylinders/h supplied by Viet An. This isasemi-automatic bottle blowing machine using the latest Italian technology in 2019 with the advantage of extremely energy saving. Assembled and completed at Viet An's factory in Vietnam with ISO 9001: 2015 standards. This isasemi-automatic machine so it takes 1 worker to operate it.
VAPET400 5L လေမှုတ်စက်က Viet An မှ ပေးပို့ထားသော တစ်နာရီလျှင် ၄၀၀ စလင်ဒါ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ၅ လီတာ ဘူးလေမှုတ်စက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက အင်နာဂျီကို အလွန် ချွေတာပေးတဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် အီတလီနည်းပညာကို အသုံးပြုထားတဲ့ တဝက်အော်တို ဘူးလေမှုတ်စက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီယက်နမ်တွင်ရှိသော Viet An စက်ရုံတွင် ISO 9001:2015 စံနှုန်းအတိုင်း တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ တဝက်အော်တို စက်ဖြစ်တာကြောင့် လည်ပတ်ရန်အတွက် အလုပ်သမားတစ်ယောက် လိုအပ်ပါတယ်။
Photo ofa5 liter bottle blowing machine VAPET400 5L
VAPET400 5L ၅ လီတာ ဘူးလေမှုတ်စက်၏ပုံ
VAPET400 5L bottle blowing machine system (Required) from Viet An includes:
Viet An မှ VAPET400 5L ၅ လီတာ ဘူးလေမှုတ်စက်တွင်……
A. Main machine system (blowers and heaters)
အဓိက စက် (လေမှုတ်စက်များနှင့် အပူပေးစက်များ)
Photo of blower and heater
Model 5L VAPET400 - 5L
Capacity for 5000ml bottle (pcs/h)
၅၀၀၀ မီလီလီတာ ဘူးများအတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း
လေမှုတ်ခေါင်းတစ်ခု၏ အများဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 400
အကြီးမားဆုံးသော ဘူးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 5
အပူပေးခြင်း လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 11
ပုံစံခွက် ပိတ်ပေးသော အား 250
လေမှုတ်စက် အရွယ်အစား 1700*670*1860
အပူပေးစက် အရွယ်အစား 1700*650*1450
Heater: has the effect of heating the Preform and distributing heat evenly on the surface of the Preform. Then the surface of the Preform is expanded evenly so that it can be transferred to the server unit to blow out the standard shells. Minimize errors.
အပူပေးစက်- အကြိုပုံသွင်းခြင်းကို အပူပေးခြင်း၊ ထိုအပေါ်သို့ အပူကို ဖြန့်ပေးခြင်း အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။ ထို့နောက် ၄င်းရဲ့ မျက်နှာပြင်ကို ချဲ့ပေးပါတယ်။ သို့မှသာ ၄င်းက စံချိန်မီသော အခွံကို လေမှုတ်ရန် ဆာဗာယူနစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှားအယွင်း နည်းစေပါတယ်။
Blowing machine: Consists of blowers and molds. Thanks to the compressed air of the air compressor, the Preform expanded from the machine to the heat is fed into the blower mold unit. The blower then blows air from the high-pressure air compressor, causing the Preform to deform intoa5000 ml cylinder shell in accordance with the shape of the mold. If you wish to still use this 5000 ml bottle blower to blow bottles smaller than 2000 ml,adifferent blower and die must be used. And you can contact Viet An for private reservation.
လေမှုတ်စက်- လေမှုတ်ကိရိယာနဲ့ ပုံစံခွက် ပါရှိပါတယ်။ လေဖိသ်ိစက်ရဲ့ ဖိသိပ်ထားသော လေကြောင့် စက်မှ အပူသို့ တိုးချဲ့ထားသော အကြိုပုံသွင်းခြင်းကို လေမှုတ်ပေးသော ပုံစံခွက် ယူနစ်တွင် ထားပါမယ်။ လေမှုတ်ပေးသော ကိရိယာက လေကို ဖိအားမြင့် လေဖိသိပ်စက်မှ မှုတ်လိုက်ပြီး အကြိုပုံသွင်းခြင်းကို ပုံစံခွက်အတိုင်း ၅၀၀၀ မီလီမီတာ ဆလင်ဒါ အခွံအဖြစ် ပုံစံပြောင်းပေးပါတယ်။ ဒီ ၅၀၀၀ မီလီလီတာ ဘူးလေမှုတ်စက်ကို ၂၀၀၀ မီလီလီတာအောက် ဘူးများအတွက် အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင် ကွဲပြားတဲ့ လေမှုတ်ကိရိယာနဲ့ တံဆိပ် လိုအပ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် သီးသန့်ဆွေးနွေးရန် Viet An ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
B. The auxiliary equipment ofa5 liter bottle blower with capacity of 400 cylinders/h
တစ်နာရီလျှင် ၄၀၀ ဆလင်ဒါလုပ်ဆောင်နိုင်သော ၅ လီတာ ဘူးလေမှုတ်စက်၏ အကူ ပစ္စည်းများ
Photo of High – Pressure Air Compessor
ဖိအားမြင့် လေဖိသိပ်စက်၏ ပုံ
လျှပ်စစ်ပါဝါ Kw 15
Compressor air capacity
ဖိသိပ်စက် လေလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း M3/min 1/2
စက်၏ အတိုင်းအတာ D*R*C mm 2005*795*1260
အလေးချိန် KG 550
High Pressure Air Compressor: createahigh-pressure air stream, provide high-pressure air to blow the bottle.
ဖိအားမြင့် လေဖိသိပ်စက်- ဖိအားမြင့် လေစီးကြောင်း ဖန်တီးပေးတယ်။ ဘူးကို မှုတ်ရန် ဖိအားမြင့်သော လေ ပေးတယ်။
လေတိုင်ကီ Unit Number
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း Liter 440
တိုင်ကီ အရွယ်အစား D*H mm dày 10mm 500*2000
အလေးချိန် KG 250
Air cylinder: The gas tank acts to balance the air, helping the air blowing from the high-pressure compressor to the blower evenly. So, the tank will not fail.
လေဆလင်ဒါ- ဂက်စ်တိုင်ကီက ဖိအားမြင့် လေဖိသိပ်စက်မှ လေမှုတ်ကိရိယာသို့ လေမှုတ်ခြင်းကို ကူညီပေးပြီး လေကို ညှိပေးရန် လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တိုင်ကီက မပျက်စီးပါဘူး။
လေစစ်ထုတ်ကိရိယာများ Unit Number
အထွေထွေ ဖော်ပြချက်များ m3/Mpa 2.0/3.0
Air filter: The air filter is mounted behind the air tank (also known as the gas tank). The filter works to filter the air and clean the air before it is put into the air dryer.
Air dryer : Has the effect of drying the air before blowing the bottle. This will limit the failure of the bottle to be blown out.
Photo of Cooling Tower
Cooling tower : Cool the flask and finished product after blowing. Because if there is no cooling tower, it will get hot after blowing it and stick to the mold. Makes it difficult for you to separate the jar.
အေးစေသောတာဝါ- လေမှုတ်ပြီးနောက် ပုလင်းနဲ့ ထုတ်လုပ်ပြီးသော ပစ္စည်းကို အေးပေးပါတယ်။ တကယ်လို့ အေးစေသောစက်သာ မရှိခဲ့လျှင် လေမှုတ်ပြီးတဲ့အခါ ဘူးက ပူနေပြီး ပုံစံခွက်တွင် ကပ်နေမှာ ဖြစ်တယ်။ ပုလင်းကို ခွဲထုတ်ရန် သင့်အတွက် ခက်ခဲစေမှာ ဖြစ်တယ်။
Above is the system of blowing machine 5L VAPET400 - 5L of Viet An.
အပေါ်က ဖော်ပြထားခဲ့တာက Viet An မှ VAPET400 5L လေမှုတ်စက်၏ စနစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
MOLDS (PRIVATE BUY) for5Liter bottle blower
၅ လီတာ ဘူးလေမှုတ်ကိရိယာအတွက် ပုံစံခွက်များ (သီးသန့်ဝယ်ယူရမည်)
Photo of molds in bottle blowing machine
ဘူးလေမှုတ်ကိရိယာမှ ပုံစံခွက်များ ပုံ
In addition, you must purchaseaseparate mold to match the 5-liter flask you want to create. You can order in outside for providing. Not necessarily buying from Viet An.
ထို့အပြင် ၅ လီတာ ပုလင်းနဲ့ သင့်တော်တဲ့ ပုလင်းကို ဖန်တီးချင်တယ်ဆိုရင် သီးခြား ပုံစံခွက်ကို ဝယ်ယူရပါမယ်။
Imported Steel Mold 5000 ml
တင်ပို့ထားသော စတီး ပုံစံခွက် ၅၀၀၀ မီလီလီတာ 1050 USD
Viet An Steel Mold produces 5000 ml
Viet An စတီးပုံစံခွက်က ၅၀၀၀ မီလီလီတာ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ 700 USD
Operating procedure ofa5 liter bottle blower 5L VAPET400 - 5L supplied by Viet An
Viet An မှ ပေးပို့သော ၅ လီတာ ဘူးလေမှုတ်ကိရိယာ 5L VAPET400 - 5L ၏ လုပ်ဆောင်ပုံ နည်းလမ်း
Step 1: Place the Preform in the heater to heat it, allowing it to expand evenly.
အဆင့် ၁- အကြိုပုံသွင်းခြင်းကို အပူပေးရန် အပူပေးစက်ထဲသို့ ထည့်ပါ။ ၄င်းကို ချဲ့ရန် ခွင့်ပြုပါ။
Step 2: Place the evenly expanded Preform into the blower mold. To proceed with blowing. What shape you want the bottle to look like, it will depend on the mold you order!
အဆင့် ၂- ချဲ့ထားသော အကြိုပုံသွင်းခြင်းကို လေမှုတ်ပုံစံခွက်ထဲတွင် ထားပါ။ လေမှုတ်ရန် အတွက်ပါ။ ဘူးရဲ့ ပုံစံက သင်ဝယ်ယူထားတဲ့ ပုံစံခွက်ပုံအတိုင်း ထွက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Step 3: The finished mold and jar after blowing will be cooled byacooling tower, to be pushed out.
အဆင့် ၃- လေမှုတ်ပြီးသွားတဲ့ ပုံစံခွက်နဲ့ ပုလင်းကို အေးစေသောတာဝါဖြင့် အေးအောင်ပြုလုပ်ပြီး အပြင်သို့ ထုတ်ပါမယ်။
Step 4: After the bottle is blown, it will be sent out by the worker for filling (if you areawater business) or to the consuming place (if you areabottle business).
အဆင့် ၄- ဘူးကို လေမှုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါ ၄င်းကို အလုပ်သမားမှ လောင်းဖြည့်ရန်နေရာ (တကယ်လို့ သင်က ရေလုပ်ငန်းရှင် ဆိုရင်) ဒါမှမဟုတ် သုံးစွဲရန်နေရာ (တကယ်လို့ သင်က ရေဘူးလုပ်ငန်းရှင် ဆိုရင်) သို့ ပို့ပေးရပါမယ်။
Advantages of the VAPET 400 5L5Liter bottle blowing machine with capacity of 400 bottles/h of Viet An
Viet An ၏ တစ်နာရီတွင် ဘူးပေါင်း ၄၀၀ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသော 5L VAPET400 - 5L ၅ လီတာ လေမှုတ်စက်ရဲ့ ကောင်းကျိုးများ
The price ofa5 liter bottle blowing machine is always the cheapest in the market.
VAPET400 5L bottle blowing machine uses the latest Italian technology so extremely energy-saving. Reducing the price of finished products, helping you to compete extremely well with the market.
၅ လီတာ လေမှုတ်စက်ရဲ့ ဈေးနှုန်းက ဈေးကွက်မှာ ဈေးအပေါဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ 5L VAPET400 - 5L ဘူးလေမှုတ်စက်က နောက်ဆုံးပေါ် အီတလီနည်းပညာကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် အင်နာဂျီကို အလွန် ချွေတာပေးပါတယ်။ ထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့ ပစ္စည်းရဲ့ ဈေးနှုန်းကို လျှော့လိုက်ခြင်းက သင့်ကို ပိုမိုပြည့်စုံစွာ လုပ်ဆောင်ပေးပါလိမ့်မယ်။
The bottle blower provided by Viet An is the only machine on the market that can blow 5000ml bottles and blow 500 ml, 300 ml, 1500 ml, 2000 ml bottles.
Viet An ရဲ့ ဘူးလေမှုတ်ကိရိယာက ၅၀၀၀ မီလီလီတာ၊ ၅၀၀ မီလီလီတာ၊ ၃၀၀ မီလီလီတာ၊ ၁၅၀၀ မီလီလီတာ၊ ၂၀၀၀ မီလီလီတာဘူးများကို လေမှုတ်ပေးနိုင်တဲ့ ဈေးကွက်မှ တစ်ခုတည်းသောစက် ဖြစ်ပါတယ်။
The 5L VAPET400 - 5L bottle blowing machine is also compactly designed without wasting space. Make your workshop space clean and eye-catching.
VAPET400 5L ဘူးလေမှုတ်စက်ကို နေရာမပြုန်းတီးစေရန် သိပ်သည်းသော ဒီဇိုင်း ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အလုပ်ရုံနေရာကို သန့်ရှင်းစေပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိစေပါတယ်။
The5Liter bottle blower comes withalong-term warranty of up to 12 months.
၅ လီတာ ဘူးမှုတ်ကိရိယာက ၁၂ လ အာမခံချက်ရှိပါတယ်။ ရောင်းချပြီးနောက် ဆားဗစ်ကလည်း အလွန် ကောင်းပါတယ်။
Viet An's5liter bottle blowing machine meets ISO 9001: 2015 quality standards
Viet An ၏ ၅ လီတာ ဘူးလေမှုတ်စက်က ISO 9001: 2015 ကွာလတီ စံနှုန်းနဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။
Viet An Joint Stock Company with4branches across the country that are in Hanoi, Da Nang, Buon Ma Thuot, Ho Chi Minh, customers can visit these branches or through the factory at the address. : Lot 43 D1, H2-G2 Street, Quang Minh Industrial Park - Me Linh - Hanoi to directly see the machinery and operation method, this is to ensure accuracy and reality to help customers have the best choice. for your business.
Viet An Joint Stock Company ကုမ္ပဏီက နိုင်ငံအနှံ့ ရုံးခွဲ ၄ ခုရှိပြီး ၄င်းတို့က Hanoi, Da Nang, Buon Ma Thuot, Ho Chi Minh တို့မှာ ရှိတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Lot 43 D1, H2-G2 လမ်း, Quang Minh စက်မှုဇုန်- Me Linh – Hanoi ကို လာရောက်လည်ပတ်ပြီး စက်ယန္တရားများ၊ လည်ပတ်ပုံ နည်းလမ်းများကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဒါက တိကျမှန်ကန်မှု၊ စစ်မှန်မှုတို့ကို သေချာစေရန်၊ ဝယ်ယူသူများကို ၄င်းတို့ရဲ့ စီးပွါးရေးအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု ဖြစ်အောင် ကူညီပေးရန် ဖြစ်ပါတယ်။
If you haveaneed fora5 liter bottle blower 5L VAPET400 - 5L please contact: 0949.41.41.41 for the best advice! Wishing you good health.
တကယ်လို့သင်က ၅ လီတာ ဘူးလေမှုတ်စက် 5L VAPET400 - 5L ကို ဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင် ၀၉- ၄၉ ၄၁ ၄၁ ၄၁ ကို ဆက်သွယ်ပြီး အကောင်းဆုံး အကြံဥာဏ် ရယူလိုက်ပါ။ သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
5L VAPET400 - 5L Bottle Blowing System Specifications (Must-Buy)
5L VAPET400 - 5L ဘူးလေမှုတ်စက် ဖော်ပြချက်များ (မဝယ်မနေရ)
Latest Italian technology in 2019 - energy saving, Complete assembly at Viet An's factory in Vietnam meeting Iso 9001: 2015 standard
၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် အီတလီနည်းပညာ- အင်နာဂျီချွေတာပေးခြင်း။ ဗီယက်နမ်မှာရှိတဲ့ Viet An စက်ရုံမှာ အပြည့်အစုံ တပ်ဆင်ထားပြီး ISO 9001:2015 စံနှုန်းနဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။ Manual feeding, requires an operator
လူလုပ်အားနဲ့ ပြုလုပ်ရတဲ့အတွက် အော်ပရေတာ တစ်ယောက် လိုအပ်ပါတယ်။
အဓိကစက်စနစ် Capacity for 5000ml bottle (pcs/h)
၅၀၀၀ မီလီလီတာ ဘူးများအတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 320-400
ဖိအားမြင့် လေဖိသိပ်စက် Compressive pressure (Bar)
ဖိသိပ်စက် ဖိအား (ဘား) 30
စက်၏ အတိုင်းအတာ 2005*795*1260
ဖိအားမြင့် လေဖိသိပ်စက်များအတွက် လေတိုင်ကီ Capacity (Liter)
ဖိသိပ်ထားသော ဖိအား 30
စက်၏ အတိုင်းအတာ 500*2000
အထွေထွေ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်များ 1.5m³/3.0Mpa
အထွေထွေ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်များ 2.0m³/3.0Mpa
အေးစေသော တာဝါ General specifications
အထွေထွေ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်များ 8HP
Selling Price without mold (USD)
တင်ပို့ထားသော စတီး ပုံစံခွက် ၅၀၀၀ မီလီလီတာ
Viet An စတီး ပုံစံခွက်က ၅၀၀၀ မီလီလီတာ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။
Hỏi đáp & đánh giá 5L VAPET400 - 5L ဘူးလေမှုတ်စက်